दसैंमा यसरी छानौं खसीबोका
काठमाडौं । दसैंमा खसीबोका खरिद गर्दा खसीबोकासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर गर्नु राम्रो हुन्छ। जानकारीबिना खसीबोका खरिद गर्दा दसैं पर्व बेस्वादको हुन सक्छ । उपत्यकाको कलंकीस्थित खसीबजार, टुकुचा बजार, बिजुलीबजारलगायत स्थानमा अहिले भारतबाट आयातित र स्वदेशमै उत्पादन भएका खसीबोका बिक्रीका लागि राखिएका छन्। झट्ट हेर्दा सबै खसीबोका किनौ किनौ जस्तो लाग्छ।
विज्ञहरूका अनुसार दसैंको समयमा बिक्री हुने खसीबोका खरिद गर्दा केही आधारभूत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू भन्छन्, ‘स्वादिलो मासुका लागि स्वदेशमै उत्पादन भएका ‘लोकल’ खसीबोका नै रोजौं। लोकल खसीबोकाको तुलनामा भारतबाट आयात हुने खसीबोकाबाट नाफा बढी हुने भए पनि स्वाद र स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैन।’
चौपाया खरिदबिक्री सेवा संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक थापाका अनुसार स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर मिठो स्वाद भएको मासु खाने हो भने लोकल जातकै खरीबोका रोज्नुपर्छ। मूल्यमा लोकल खसीबोका केही महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन राम्रो भएको उनले बताए। लोकल र भारतीय खसीबोका टाढाबाट हेर्दा उस्तै देखिए पनि फरक छुट्याउन सकिन्छ।
दसैंमा बिक्री हुने खसीबोका सिङमा ‘हरियो’ र ‘रातो’ लगाइएको रङका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ। हरियो रङले स्वस्थ्यवद्र्धक छ भन्ने जनाउँछ भने रातोले अस्वस्थ्य छ भन्ने बुझाउँछ। सरकारले दसैंको अवधिमा उपत्यकामा भित्रिने सम्पूर्ण खसीबोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वस्थ्य भेटिएको अवस्थामा सिङमा हरियो रङ र अस्वस्थ्य भेटिएमा रातो रङ लगाइदिन्छन्।
पशुपन्छी मन्त्रालयका पशु चिकित्सक डा. मुकुल उपाध्यायका अनुसार स्वादिलो मासुका लागि लोकल खसीबोका खरिद गरेको जाति हुन्छ। यसका लागि खसीबोकाको शरीरमा दाग छ वा छैन हेर्नुपर्छ। लोकल खसीबोकाको शरीरमा दाग हुँदैन। शरीरको भुत्ला टाटेपाटे गरी काटिएको हुँदैन। त्यस्तै लोकल खसीबोकाको शरीरमा भुत्ला बढी हुन्छ।
लोकल खसीबोका फुर्तिला, हृष्ट पुष्ट, चञ्चले हुन्छन् भने भारतीय एकलकाटे, दुब्लो, पातलो र टाढाबाट हेर्दा बिरामीजस्तो देखिन्छ। भारतीय खसीबोका गहुँ र चना चरण सामग्रीमा बढी रुचाउँछन्। ‘लोकल जातको खसीबोकामा मासु केही कम हुन्छ। बोसो पनि कम हुन्छ। तर स्वस्थ्यकर र स्वादिलो मासु लोकलमै हुन्छ’, डा. उपाध्यायले भने। उनकाअनुसार लोकल खसीबोकाको मासु केही दिनसम्म जर्गेना गरी खान मिल्छ, बिग्रिँदैन। तर भारतीय खसीबोकाको मासु धेरै दिनसम्म राख्न मिल्दैन।
यसबाहेक स्वस्थ्य खसीबोका छनोट गर्न आधारभूत कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
यस्ता खसीबोका नकिनौं
श्वासप्रश्वास बढ्ने, नाक, मुख र आँखाबाट र्‍याल र सिगान निस्किएको र ज्वरो आएको खसीबोका किन्नु हुँदैन। यसैगरी टाउको आकाशतिर उचालेर फनफनी घुम्ने, कराउने र लड्ने खसीबोका पनि खरिद गर्नुहुन्न। त्यसैगरी खसीबोकाको गिंजा र खुट्टामा घाउ आएको, नखाने, सुस्त र झोक्राउने खसीबोकाको मासु पनि खानु हुँदैन।
मासु उपभोग गर्दा सचेत होऔं ः खाद्य विज्ञ
दसैंमा सचेत भएर मासु उपभोग गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। दसैंको समयमा सकेसम्म ‘थोरै तर गुणस्तरीय मासु नै सेवन गरौं’ भन्ने उनीहरूको सुझाव छ। सामान्य समयभन्दा यो समयमा झन्डै १० दोब्बर बढी मासुको उपभोग हुन्छ। मासु खरिद गर्दा हरियो र कालोजस्तो देखिने, च्यापच्याप लाग्ने र दुर्गन्ध आउने मासु खरिद गर्न हुँदैन।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य विज्ञ हस्तबहादुर राईकाअनुसार बोसो भएको मासु पनि सकेसम्म खरिद गरी उपभोग गर्नुहुँदैन। चिल्लो, पिरो, मसालेदार, सेकुवाको रुपमा मुख रसाउने गरी खाइने मासुका परिकारबारे सचेत हुन खाद्य वैज्ञानिकको सुझाव छ। दसैंको समयमा झन्डै मासुबाट बनेका दुई दर्जन परिकार तयार पारी खाने चलन छ।
नेपाली बजारमा उत्पादन हुने मासुमध्ये करिब ८० प्रतिशत मासु अस्वस्थ्यकर छन्। राई भन्छन् ,‘तथापी उपभोक्ताले आफैं सचेत भएर मासु उपभोग गर्न सक्छन्। छाला भएको मासु प्रयोग गर्नु हुँदैन।’
बंगुरको हकमा भने थोरै बोसो भएको मासु राम्रो मानिन्छ। खरिद गरेको वा घरमै काटिएको मासु धेरै दिनसम्म राख्नलाई मासुलाई पहिलेदेखि नै टुक्रा–टुक्रा बनाएर फ्रिज(रेफ्रिजरेटर) मा माइनस १८ देखि ३० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रममा राख्दा गुणस्तर कायमै हुन्छ। ‘तर काँचो मासु फ्रिजमा राख्नुपर्छ। फ्रिजबाट झिकेर फेरि आवश्कताअनुसार काटेर पकाउने,’ राई भन्छन्।
पकाइसकेको मासु फ्रिजमा राख्ने र खाने बेलामा तताउने र फेरि फ्रिजमा राख्ने स्वास्थ्यका लागि घातक हुनसक्छ। यस्तो मासु सेवन गर्दा फुड प्वाइजन हुने खतरा हुन सक्छ। मासुमा अम्लियपना ५.७ पीएचभन्दा कम र ६.३ पीएचभन्दा बढी हुनुहुँदैन। यस्तो भयो भने मासु कालो र फिक्का देखिन्छ।
प्रतिदिन १०० ग्रामसम्म मासु सेवन गर्नुपर्छ। मासु सकेसम्म ७२ डिग्री सेल्सियसमा पकाएर खाँदा उत्तम मानिन्छ। प्रतिग्राम मासुमा एक लाखभन्दा तल जीवाणु भेटिए त्यस्तो मासु पनि खान योग्य मानिन्छ।
गुस्तरहीन मासु सेवन गर्नाले झाडापखाला लाग्ने, पेट दुख्ने, क्षयरोग लाग्ने, कलेजो, मिर्गौंला र टाउकोमा असर गर्ने, प्रजनन क्षमतामा असर पुर्‍याउनेलगायत समस्या देखापर्न सक्छ। मासुसँगै हरियो सागपात र तरकारी पनि उपभोग गर्दा अति उत्तम हुने राईले बताए।
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७५, मंगलवार